मेडिकल चेतावनी प्रणाली
मोबाइल मेडिकल चेतावनी प्रणाली
Copy of मोबाइल मेडिकल चेतावनी प्रणाली
गैर-लक औषधि व्यवस्थापन
लक औषधि औषधालय
यो कसरी अनुगमित हुन्छ?
यो कोको लागि हो?
यसको मूल्य के छ?
हामी कार्य लिन्छौं
र सहयोग पठाउनुहोस्
आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीहरूले कसरी काम गर्छन्?
तपाइँको व्यक्तिगत मद्दत बटन सबै समय लगाउनुहोस्। यसलाई आफ्नो घाँटी वरिपरि वा रिस्टब्यान्डको रूपमा लगाउनुहोस्। यदि तपाईंसँग आपतकालिन छ र साथीहरू, परिवारका सदस्यहरू, पुलिस, फायर डिपार्टमेन्टहरू, वा आपतकालीन चिकित्सा सेवाहरू सम्पर्क गर्न आवश्यक छ भने, बटनमा बटन थिच्नुहोस्।
अलार्मले तपाईंलाई हाम्रो US-आधारित जीवन सुरक्षा अपरेटरहरूलाई तपाईंको ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा वा सेलुलर नेटवर्क मार्फत जडान गर्दछ यदि चेक आउट (थप शुल्क) मा चयन गरियो भने। तिनीहरूले तपाइँलाई सोध्नु पर्छ कुन प्रकारको मद्दतको लागि तपाइँलाई मद्दत चाहिन्छ र मद्दत पठाउँछन्।
के हुन्छ यदि म आपतकालमा जवाफ दिन सक्दिन?
यदि तपाइँ आपतकालको समयमा जवाफ दिन सक्नुहुन्न भने चिन्ता लिनु पर्दैन। हाम्रो जीवन सुरक्षा अपरेटरहरूको टीमले तपाइँको आपतकालिन सम्पर्कहरू सम्पर्क गर्नेछ। यदि हामी तपाईंको आपतकालीन सम्पर्कमा पुग्न सकेनौं भने हामी तत्काल मद्दत पठाउनेछौं।
किन मात्र फोन प्रयोग गर्नुहुन्न?
अक्सर हामीलाई यो प्रश्न सोधिन्छ, "किन म मद्दतको लागि कल गर्न मेरो फोन प्रयोग गर्दिन?" जबकि फोन एक महान व्यक्तिगत आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली हो, तिनीहरूसँग धेरै सीमित सुविधाहरू छन्। तिनीहरू महान छन् यदि तपाईं फोन नम्बर डायल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको स्थान वर्णन गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंको मेडिकल अवस्थाको प्रेषकलाई सूचित गर्नुहोस्। वास्तविकतामा, आपतकालमा यी सबै चीजहरू गर्न सम्भव नहुन सक्छ।
व्यक्तिगत आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीहरू फरक छन् किनकि तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको मद्दतको लागि कल गर्न बटन थिच्नुहोस्। फोन नम्बर याद गर्नु पर्दैन, तपाईलाई कसैलाई आफ्नो स्थान बताउनु पर्दैन, र हाम्रो जीवन सुरक्षा अपरेटरहरूसँग पहिले नै फाईलमा आवश्यक मेडिकल जानकारीको प्रोफाइल छ। यस तरीकाले, यदि तपाईं आपतकालको बेलामा प्रतिक्रिया दिन असक्षम हुनुभयो भने हामी तपाईंलाई अझै मद्दत पठाउन सक्दछौं!
ती तीन मुख्य पोइन्टहरूले हाम्रा सबै ग्राहकहरूलाई आपतकालिन स्थितिमा अधिक समर्थन र हेरचाह प्रदान गर्दछ।
राष्ट्रव्यापी हजारौं ग्राहकहरूको निगरानी गर्दै।
अण्डरराइटर प्रयोगशालाहरू सूचीबद्ध (UL) ।
२-मार्ग आवाज संचारमा विशेषज्ञता।
उच्च प्रशिक्षित अपरेटरहरू TMA मानकमा।
पाँच हीरा प्रमाणित निगरानी केन्द्र
को लागि व्यक्तिगत आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीहरू?
चिकित्सा सचेत प्रणालीबाट कसले फाइदा लिन सक्छ?
धेरै व्यक्तिहरू विश्वास गर्दछन् कि आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीहरू केवल बुढाका लागि हुन्। सत्य यो हो कि अरू धेरै व्यक्तिहरूले दिनहुँ हाम्रो सेवाबाट फाइदा लिन्छन्! केहि उदाहरणहरू:
यसको कति खर्च हुन्छ?
ST० दिनहरूको लागि सितारा अलर्ट निःशुल्क प्रयास गर्नुहोस्
बजेट मैत्री विकल्पहरू उपलब्ध छन्! हामी हाम्रो अद्भुत STAAR ग्राहकहरूको लागि साँच्चै आभारी छौं।
विशेषका लागि कल गर्नुहोस् जुन अनलाइन उपलब्ध नहुन सक्छ।
विक्रेता Inquirie s
नि: शुल्क ब्रोशर
एक स्वचालित सुरक्षा चेतावनी कं
00 35०० मुख्य सेन्ट
मुन्हाल, पीए १1१२०